‘नारायणकाजीसँग दुश्मनी छैन तर समृद्ध गोरखाका लागि मै चाहिन्छ’
नयाँशक्ति पार्टी नेपालका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराई अहिले चुनावी प्रचारमा सक्रिय छन् । कांग्रेससँग तालमेल गरेर गोरखा २ मा उम्मेदवारी घोषणा गरेका डा. भट्टराईले नयाँ अवतारमा मतदातासँग भोग माग्दै छन् । पूर्व सहयोद्धा तथा वाम गठबन्धनबाट टिकट पाएका माओवादी वरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठसँग उनको प्रतिस्पर्धा हुँदैछ ।